Wakiilka Dembélé oo xiriir la sameeyay mid ka mid ah kooxaha waaweyn ee Yurub – Gool FM
Dajiye January 26, 2022
(Barcelona) 26 Jan 2022. Wargeysyada dalka Spain ayaa waxay si layaab leh ugua warbixiyeen arimo ku saabsan Ousmane Dembélé, kaasoo uu muqdi ku jiro mustaqbalkiisa kooxda Barcelona, maalmo kahor dhammaadka suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Moussa Sissoko oo ah wakiilka Dembélé ayaa dhawaanahan ku sugnaa Spain si uu ula kulmo maamulka Barcelona, isla markaana ay uga wada hadlaan xaalada laacibka reer France.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in wakiilka Ousmane Dembélé uu taleefan u soo diray agaasimaha ciyaaraha kooxda Paris Saint-Germain ee Leonardo Araújo.
Dembele ayaa diiday dalabyada kaga yimid maamulka Barcelona si uu u cusbooneysiiyo heshiiska, taasoo keentay in kooxda ay u soo dirto fariin hanjabaad ee ah inuu qandaraaska cusbooneysiiyo ama uu baxo, sida ay sheegeen maamulka iyo tababare Xavi Hernandez.
Waxaa lagu soo waramayaa in bixitaanka Dembele ay Barcelona u sahli doonto inay la soo saxiixdaan weraryahanka Juventus ee Álvaro Morata, iyo kan kooxda Ajax ee Nicolás Tagliafico, si ay u xoojiyaan safka Blaugrana inta lagu jiro suuqa jiilaalka.
"Haddii uu kooxda sii joogo, ma ciyaari doono" - Xavi Hernandez oo go'aan cad ka istaagay xaaladda Ousmane Dembele